सार्म क्याप्सूल बनाम तरल
सर्म्स क्याप्सुल वा तरल
किन सर्म्स क्याप्सुलहरू राम्रो छन्
यदि तपाईं SARMs खरीद गर्न वरिपरि हेर्दै हुनुहुन्छ र अलमल्लमा छाडिनुभयो जुन क्याप्सुल वा लिक्विडको बीचमा उत्तम संस्करण हो भने, यो गाइड तपाईंको लागि मात्र हो।
त्यहाँ फरक गलत बयान र हास्यास्पद थियरीहरू फ्याँकिएका छन् कि तरल SARMs क्याप्सलेट गरिएको SARM भन्दा धेरै राम्रो छ। अचम्म मान्नु पर्दैन, धेरै जसो यी बयानहरू ती व्यक्तिहरूबाट आएका हुन् जसले तरल एसएआरएमहरूको नाफा र बिक्रीमा चासो राख्दछन् (उनीहरूलाई भुक्तानी गरिन्छ, उनीहरूले काम गर्दछन्, वा उनीहरूले एसएआरएम भण्डार गर्दछन जुन केवल तरल एसएआरएमहरूमा डील गर्दछ)। हामी तपाईंलाई एउटा कुरा एकदमै स्पष्टसँग बताउँछौं, सबै SARMs कच्चा पाउडरको रूपमा सुरू हुन्छ। यो यति सरल छ!
स्पष्ट र पूर्ण समझ प्राप्त गर्न हामी SARMs कच्चा पाउडरको निर्माणको बिन्दुदेखि बिक्रीको बिन्दुसम्मको आधारभूत यात्रामा हिँडौं।
कच्चा SARMs अवयवहरू विनिमयबाट तयार हुन्छन् र SARMs स्टोरहरूमा बाहिरबाट उत्पत्तिबाट पठाइन्छ। तिनीहरू कच्चा पाउडरको रूपमा सुरू हुन्छन् उनीहरूको वितरण प्रणालीको एक फार्ममा राख्नु अघि उनीहरूलाई बिक्रीमा राख्नु अघि र शिपमेंटका लागि पठाइनु अघि उनीहरू अन्तिम प्रयोगकर्ताहरूद्वारा प्रशासित हुन्छन्। यो SARMs स्टोरको एकल परिप्रेक्ष्य हो जुन प्रशासनको लागि अनुसन्धानकर्ताहरूलाई बिक्रीको लागि बिक्रीको लागि प्रयोग गर्ने बारे। याद राख्नुहोस्, क्षमता स्तरहरू परिवर्तन हुँदैन केवल एक SARM पाउडर फार्म, तरल फारम, वा अहिले सम्म क्याप्सुलेटेड फारममा छ।
अब वास्तविक सम्झौता आउँछ! क्यापसुल फारममा कच्चा पाउडर राख्नुको मतलब तिनीहरू मानव उपभोगका लागि हो जहाँसम्म अनुसन्धान रसायनहरू सम्बन्धित छन्। यो एकमात्र कारण हो किन धेरै SARMs स्टोरहरूले SARMs क्याप्सुल फारममा बेच्न चाहँदैनन् र त्यसकारण चलिरहन्छ र फ्लोटिंग असंवेदनशील सिद्धान्तहरू र अफवाहहरू जारी राख्छ। तिनीहरू कानूनी रूपमा अझ बढी सावधान हुन चाहन्छन्। तपाईलाई मन दिनुहोस्, तिनीहरू क्याप्सुल बेच्दै छैनन् किनकि उनीहरूसँग केहि लुकाउने कुरा छ।
त्यहाँ सबै सत्य छ कि सबै SARMs आपूर्तिकर्ताओं को लागी धेरै भाग को लागी क्याप्सुल को उपयोग गर्न को लागी मन परेको थियो केहि उदाहरणहरु बाहेक जहाँ सानो बृद्धिमा खुराक आवश्यक छ। हाम्रो छलफलको लागि आउँदै, सबै SARMs स्टोरहरूले SARM को क्याप्सुलेटेड फाराम मात्र मनपर्दछ किनकि अन्त प्रयोगकर्ताहरूलाई बढी मनपर्दो हुन्छ, शिप गर्न सजिलो हुन्छ, र लामो शेल्फ लाइफ हुन्छ। स्टोरले पाउडर क्याप गर्ने निर्णय गर्दछ वा तरल समाधानमा अनाजको मदिरामा निलम्बन गर्ने, यो तिनीहरूमा पूर्ण रूपमा निर्भर छ। पाउडर अझै पाउडर हो र दिनको अन्त्यमा समान रूपमा राम्रो काम गर्नुपर्दछ।
अब हामी कल्पना गरौं कि किन परम्परागत फार्मेसीहरूमा प्रत्येक भिटामिन, पूरक, वा औषधि एक गोलीको रूपमा 99 XNUMX प्रतिशत पटक हो। के ती पसलहरूमा यी औषधीहरूको गोली बनाएर बेचिन्छ र लोकप्रिय हुन्छन् यदि यि गोलीहरूको जैविक उपलब्धता चिन्ताको प्रमुख कारण थियो? यदि हजारौं र लाखौं प्रयोगकर्ताहरूले दशकौंसम्म उनीहरूलाई गोलीको रूपमा खरीद गर्दै छन् यदि तिनीहरू अनाजमा रक्सीमा निलम्बन गरिएको छैन भने प्रभावहीन मानिन्छ भने?
क्याप्सलेट गरिएको SARMS किन राम्रो छ?
तरल SARM र क्याप्सुलेटेड SARM को बिच सब भन्दा ठूलो भिन्नता भनेको स्थिरता हो। पूर्व मूल रूपमा पूर्ण तरल हो र पूर्व कडा प्याक र घना हो। यहाँ यो याद राख्नु पनि सार्थक छ कि SARM को तरल शीशीहरू ट्रान्जिटको सम्पूर्ण प्रक्रियाको बखत क्षतिमा बढी खतरामा छन्। यसमा थप्नुहोस्, हुलाक कर्मचारी र भन्सारहरू द्वारा प्याकहरूको असभ्य ह्यान्डलिंग।
यसको अर्थ यो हुन सक्छ कि तपाईं सम्भवतः एक तरल SARM को भाँचिएको वा बिग्रिएको बोतल यसको लागि १-14- days० दिन पर्खनु भएपछि अन्त हुने खतरामा हुनुहुन्छ। त्यसो भए, तपाईलाई क्षतिको प्रमाण पेश गर्न वा हुलाक अधिकारीहरूसँग लडाई गर्न भनिएको छ जुन एक हप्ता वा दुई दिन लाग्न सक्दछ, यदि त्यस भन्दा बढि होइन। सबैभन्दा खराब पक्ष यो हो कि प्रतिस्थापन, यदि कहिले पठाइन्छ, फेरि एक शीशी बोकेको तरलमा हुनेछ र टुक्रिनु, हराउनु, वा फेरि क्षतिग्रस्त हुने सम्भावना छ किनकि यो स्पष्टतया उही हुलाकका कर्मचारीहरू र भन्सारहरू द्वारा ह्यान्डल हुनेछ।
यदि त्यो सबै होईन भने, SARM का केही सक्रिय सामग्रीहरूले तरलको रूपमा उनीहरूको प्रभावकारिता र शक्ति गुमाउँछन्। त्यहाँ कुनै चुनौतीपूर्ण कथन छैन कि उत्पाद अन्ततः तपाईंमा पुग्नेछ तर तपाईं निश्चित रूपमा SARM को आदर्श परिमाण र स्तर प्राप्त गर्नुहुन्न जुन तपाईं मूल रूपमा खरीदको लागि चाहानुहुन्छ वा तपाईंको शरीर द्वारा बढेको र विकासको लागि आवश्यक छ।
यसबाहेक, यो कुनै रकेट विज्ञान छैन कि SARMs क्याप्सूल वा तरलमा रहेको सामग्री अन्ततः शरीरमा पाचन प्रणाली मार्फत अवशोषित हुन्छ। दुबै तरल SARM र क्याप्सुलेटेड SARM हरू पेटमा थोरै समयको लागि रहनेछन् उनीहरूको मेटाबोलिजेस हुनु अघि र वितरण गर्नु अघि तिनीहरूलाई आवश्यक पर्ने ठाउँमा।
तरल SARM को उपयोगी उपयोगी सामग्रीहरू प्राय: यसलाई प्रशासित हुने बित्तिकै पेटमा पचाइएको खानाको साथ मर्ज हुने सम्भावना हुन्छ। यसको मतलब यो हो कि तिनीहरू मध्ये धेरै लाभदायक सामग्री हराउनु अघि नै उनीहरूको कार्य संयन्त्रको साथ सुरु गर्नु सक्दछ।
अर्को तर्फ, क्याप्सलेट गरिएको SARM हरू कडा र लामो टुक्रिनको लागि डिजाइन गरिएको हो। यो पूर्वनिर्धारित उद्देश्यका साथ गरिन्छ जुन सबै लाभदायक सामग्रीहरूलाई प्रणाली द्वारा समाहित गर्न अनुमति दिन्छ। यसबाहेक, यी सामग्रीहरू विघटन हुनको लागि झुकाउँदैन जब तिनीहरू ग्यास्ट्रिक एसिड (पेट एसिड) को सम्पर्कमा आए।
लिक्विड सेलेक्टिव एन्ड्रोजन रिसेप्टर मोड्युलेटरहरू सामान्यतया अनावश्यक फिलरहरू जस्तै बनिकटहरू र कृत्रिम स्वादहरूसँग बनेका हुन्छन् ताकि उनीहरूका अधिकांश सामग्रीहरू स्वाभाविक रूपमा हुन्छन्। अर्कोतर्फ, क्याप्सलेट गरिएको SARMs एक विशिष्ट गन्ध र स्वादको साथ आउँदछ जुन तपाईंलाई आकर्षक लाग्दैन तर यो आवश्यक छैन कि हरेक राम्रो चीजको राम्रो स्वाद होस् वा स्वाद नै छैन। यो मूलतः उही समान चीज हो जुन तपाइँको शरीरलाई वास्तवमा राम्रो आकारमा रहन आवश्यक छ।
तरल SARMs खरीदको साथ अर्को समस्या यो हो कि उत्पादन जब अन्न रक्सी र पूरकहरू जस्तै स्वादहरू र additives को साथ पूरक हो, खरिद गरिनेछ, repackaged, पुनर्निर्मित, र तपाईं पुनः बेचिन्छ, अन्त उपभोक्ता। निर्माणको यी थपिएका चरणहरूले तपाईंलाई पूर्णतया नक्कली, उप-मानक उत्पादनहरू, वा अण्ड-डोसेड सामग्रीहरू प्राप्त गर्न जोखिममा छोड्छन् जुन अस्वस्थ परिस्थितिमा ह्यान्डल हुन्छन्।
यदि तरल SARMs का निर्माताले क्याप्सूल SARMs कानूनी होईन भनेर दावी गरिरहेको छ भने, तपाईंलाई यो याद राख्नु महत्त्वपूर्ण छ कि SARMs केवल अनुसन्धान उद्देश्यका लागि मात्र हो र विश्वका केही देशहरूमा कानुनी हो। यसको मतलव यदि क्याप्सूल SARM अवैध छ भने, तरल SARM अवैध पनि छ। यदि क्याप्सूल SARM अनुसन्धान उद्देश्यहरूको लागि कानुनी हो, त्यसैले अनुसन्धान उद्देश्यहरूको लागि SARM को तरल संस्करण हो। यसमा बिल्कुल कुनै भ्रम छैन। यो सरल र सरल छ!
तरल SARMs सँग सम्बन्धित हानिकारकहरूको सूची यहाँ अन्त्य हुँदैन। शीशी र घटक स्तर मापन गर्न गाह्रो छ र तपाईं सुईहरू, ब्याक्टेरियोस्टेटिक पानी, र यस्तै अन्य धेरै चीजहरू किन्न समाप्त गर्न सक्नुहुनेछ र अन्ततः तपाईं मौखिक रूपमा उपभोगको सट्टा तरलको इन्जेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ। यसले तपाइँलाई इंजेक्शन साइटमा फोहोर गठनको अतिरिक्त जोखिममा पार्छ, इंजेक्शन साइट दुखाई, सियोको साझेदारी, र सुई साझेदारीको कारण यौन रोगको सम्भावनाको सम्भावना। यसमा थप्नुहोस्, सम्भवतः सुईले नर्वलाई हिर्काउँदा वा गलत तरिकाले प्रशासित गरिएको छ र तपाईं अस्पतालमा आपतकालमा अवतरण गर्न सक्नुहुन्छ। यी कारणहरू वा (डिस) लाभहरू होइनन् जसका लागि तपाईंले सेलेक्टिभ एन्ड्रोजन रिसेप्टर मोड्युलटरहरू पहिलो स्थानमा किन्नुभयो। सही? तपाईंको दिमागको पछाडि यी गम्भीर हानिहरूको साथ, तपाईं सम्भवतः आफ्नो व्यायाम र फिटनेस उद्देश्यहरूमा पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्न सक्नुहुन्न। यो र यस्तै यस्तै धेरै कारणहरूले गर्दा शरीर सौष्ठव संसारले क्याप्सलेट SARMS हरूमा चलाउँछ र तरल SARMs होइन जुन शब्दबाट ठीकसँग व्यवहार गर्न दु: खी छ।
SARMs क्याप्सुलहरू कसरी खरीद गर्ने?
तपाईं धेरै SARMs भण्डारहरू फेला पार्न सक्नुहुनेछ जुन दुबै तरल SARM र क्याप्सलेट गरिएको SARM मा सम्झौता गर्दछ। हामीले पत्ता लगायौं कि तरल SARMs उनीहरूको क्याप्सुलेटेड समकक्षहरू भन्दा राम्रो छैनन्। त्यहाँ वास्तवमा त्यहाँ तरल SARMs को साथ सुरक्षित रूपमा डेलिभरी गर्ने खतरा बढी छ। यसबाहेक, तरल SARMs ले यो सख्त खुराक मापन गर्न गाह्रो बनाउँदछ जसले तपाईंलाई अनजाने अधिक मात्रामा वा चुनिंदा एन्ड्रोजन रिसेप्टर मोडुलरको दुरुपयोगको खतरामा राख्न सक्छ।
सबैमा, यो प्रख्यातबाट वास्तविक र अनुसन्धान ग्रेड क्याप्सुलेटेड SARMs खरीद गर्न सधैं राम्रो हुन्छ SARMs स्टोर "वास्तविक सम्झौताको" प्रस्ताव गर्ने प्रतिष्ठा छ र "नक्कली उत्पादनहरू र सशुल्क कथाहरू" प्रसारणमा होइन।
← पुरानो पोस्ट नयाँ पोष्ट →
Ibutamoren MK-677 को बारेमा तपाईलाई जान्नु पर्ने सबै कुरा
अक्टोबर 12, 2020
SARM का उत्तम प्रकारहरू र शरीर सौष्ठवका लागि पूरक के हुन्?
SARMs बेलायत: तपाईले २०२० को लागि थाहा पाउनु पर्छ
अधिकतम परिणामहरूको लागि १ Mus मांसपेशी निर्माण सल्लाह